တောငျခုတျဓါးကို အသုံးပွုပွီး ခှဲစိတျကုသမှုတှေ ပွုလုပျပေးတဲ့ Cuba က နတျဆရာ။ – SoShwe
Home/LifeStyle/တောငျခုတျဓါးကို အသုံးပွုပွီး ခှဲစိတျကုသမှုတှေ ပွုလုပျပေးတဲ့ Cuba က နတျဆရာ။
So Shwe May 21, 2022	LifeStyle Leaveacomment
Cuba နိုငျငံ Havana မှ “ဝိညာဉျရေးရာကုသပေးသူ” လို့ နာမညျကွီးနတေဲ့ Jorge Goliat ဆိုသူဟာ တောငျခုတျဓါးကို အသုံးပွုပွီး ခှဲစိတျကုသမှုတှေ ပွုလုပျပေးလရှေိ့တာကို လူအမြားက သတိပွုမိလာပွီး အငျတာနကျအသုံးပွုသူတှရေဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို ရရှိလာပါတယျ။
Jorge Goliat ရဲ့ ပွောပွခကျြအရတော့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈ ၃၀ တုနျးက နတျကောငျးနတျမွတျတဈပါးဟာ သူ့ဆီကိုရောကျရှိလာကာ လူသားတှရေဲ့ဝဒေနာတှကေို တောငျခုတျဓါးအသုံးပွုပွီး ကုသပေးလို့ရတဲ့ နညျးလမျးတှေ သငျကွားပေးခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ အခုလကျရှိမှာတော့ Jorge Goliat ဟာ တဈရကျအတှငျး ဝဒေနာရှငျ အယောကျ ၁၂၀ ကနေ ၁၅၀ ကို မဆေ့ေးမသုံးဘဲ ခှဲစိတျကုသမှုတှေ ပွုလုပျပေးနရေပါတယျ။
သတငျးဌာနတဈခုနဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူးထဲမှာတော့ Jorge Goliat က “သူတို့လမျးမလြှောကျနိုငျရငျ လမျးလြှောကျပွီးထှကျသှားကွတာ။ မရှလြေ့ားနိုငျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှေ ရှလြေ့ားနိုငျသှားတယျ။ အစကတညျးက ဘဝကွီးဟာ ခကျခဲပွီးသားမို့ လူတှအေားလုံးကို အကူအညီမဲ့နသေလိုမြိုး မခံစားစခေငျြဘူး။ Covid-19 လို ကပျရောဂါမြိုးကိုတော့ ရှောငျရှားလို့ မရဘူးပေါ့လေ။ ဒါပမေယျ့လညျး Covid-19 ကပျရောဂါကွောငျ့တော့ လူတှနေဲ့ ကလေးငယျလေးတှကေို လှယျလှယျနဲ့ သခှေငျ့မပွုနိုငျဘူး။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာ စိုးရိမျပူပနျမှုတှကွေောငျ့ ရောဂါဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့သူတှဟော Jorge Goliat ကို အဆကျမပွတျ ရှာဖှနေခေဲ့ကွပါတယျ။ ပနားမားမှာ နထေိုငျတဲ့စုံတှဲတဈတှဲဟာ သားဖှားခွငျးဆိုငျရာပွဿနာကွောငျ့ သမာရိုးကဆြေးဝါးတှကေို မှီဝဲအသုံးပွုခဲ့ပမေယျ့ ကလေးမှေးဖှားနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိဘဲ Jorge Goliat နဲ့ တှဆေုံ့ပွီးနောကျမှာတော့ ပထမဦးဆုံးရငျသှေးလေးကို စတငျကျိုယျဝနျဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ Jorge Goliat ဆီကနေ ကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ Leonides Lara ဆိုသူဟာလညျး “အစပိုငျးမှာတော့ ယုံကွညျဖို့ခကျခဲပမေယျ့ Jorge Goliat နဲ့ စကားပွောကွညျ့ပွီးတဲ့အခါမှာတော့ မယုံကွညျနိုငျခဲ့တဲ့ဟာတှကေ အမှနျတကယျ ဖွဈပျေါလာခဲ့တာပါ။” လို့ သူ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံကို မြှဝပွေောကွားခဲ့ပါတယျ။
ရဲအရာရှိတှကေ Jorge Goliat ရဲ့ ဆေးခနျးကို လာရောကျစုံစမျးတဲ့အခါမှာတော့ Jorge Goliat က သူဟာ ဘာအမှားမှ မလုပျထားတာကွောငျ့ ရဲတှကေို ကွညျဖွူစှာ စဈဆေးခှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ အပျေါမှာပွောခဲ့တာတှဟော ယုံကွညျဖို့လညျး ခကျခဲသလို တိကသြခြောတဲ့ သကျသသောဓကတှေ ရှိနတောကွောငျ့ မယုံကွညျလို့လညျး မဖွဈပွနျဘူးနျော . . .
တောင်ခုတ်ဓါးကို အသုံးပြုပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Cuba က နတ်ဆရာ။
Cuba နိုင်ငံ Havana မှ “ဝိညာဉ်ရေးရာကုသပေးသူ” လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Jorge Goliat ဆိုသူဟာ တောင်ခုတ်ဓါးကို အသုံးပြုပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိတာကို လူအများက သတိပြုမိလာပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိလာပါတယ်။
Jorge Goliat ရဲ့ ပြောပြချက်အရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ တုန်းက နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တစ်ပါးဟာ သူ့ဆီကိုရောက်ရှိလာကာ လူသားတွေရဲ့ဝေဒနာတွေကို တောင်ခုတ်ဓါးအသုံးပြုပြီး ကုသပေးလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ Jorge Goliat ဟာ တစ်ရက်အတွင်း ဝေဒနာရှင် အယောက် ၁၂၀ ကနေ ၁၅၀ ကို မေ့ဆေးမသုံးဘဲ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေရပါတယ်။
သတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးထဲမှာတော့ Jorge Goliat က “သူတို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် လမ်းလျှောက်ပြီးထွက်သွားကြတာ။ မရွေ့လျားနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ရွေ့လျားနိုင်သွားတယ်။ အစကတည်းက ဘဝကြီးဟာ ခက်ခဲပြီးသားမို့ လူတွေအားလုံးကို အကူအညီမဲ့နေသလိုမျိုး မခံစားစေချင်ဘူး။ Covid-19 လို ကပ်ရောဂါမျိုးကိုတော့ ရှောင်ရှားလို့ မရဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့်လည်း Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်တော့ လူတွေနဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ သေခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့် ရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာ Jorge Goliat ကို အဆက်မပြတ် ရှာဖွေနေခဲ့ကြပါတယ်။ ပနားမားမှာ နေထိုင်တဲ့စုံတွဲတစ်တွဲဟာ သားဖွားခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာကြောင့် သမာရိုးကျဆေးဝါးတွေကို မှီဝဲအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် ကလေးမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ Jorge Goliat နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာတော့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကို စတင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Jorge Goliat ဆီကနေ ကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ Leonides Lara ဆိုသူဟာလည်း “အစပိုင်းမှာတော့ ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့် Jorge Goliat နဲ့ စကားပြောကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။” လို့ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကို မျှဝေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဲအရာရှိတွေက Jorge Goliat ရဲ့ ဆေးခန်းကို လာရောက်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့ Jorge Goliat က သူဟာ ဘာအမှားမှ မလုပ်ထားတာကြောင့် ရဲတွေကို ကြည်ဖြူစွာ စစ်ဆေးခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တာတွေဟာ ယုံကြည်ဖို့လည်း ခက်ခဲသလို တိကျသေချာတဲ့ သက်သေသာဓကတွေ ရှိနေတာကြောင့် မယုံကြည်လို့လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူးနော် . . .
Previous မိနျးမ ၉ ယောကျ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဘရာဇီးမျောဒယျ။
Next လြှပျစဈကားကဏ်ဍထဲကို ခွဆေနျ့လာတဲ့ တရုတျ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးမြား။